Pataloha hoditra - Ny lamaody rehetra miverina amin'ny fahalavoana | Bezzia
Ny karazana pataloha hoditra rehetra dia miverina amin'ny fararano
Susana godoy | 08/10/2021 10:07 | fironana
Ny pataloha dia iray amin'ireo akanjo kintana vaovao ary fantatsika izany. Marina fa rehefa mangatsiaka dia miova ihany koa ny lamba hahafahana manafana ny tenantsika araka izay itiavantsika azy. Saingy misy iray izay tsy miova tokoa satria isaky ny vanim-potoana dia miverina miaraka amintsika izy ary faly amin'izany isika: Pataloha hoditra.
Izy ireo dia napetraka ho iray amin'ireo akanjo ilaina satria miaraka aminy hamorona karazana fomba sy endrika rehetra izahay. Mba hahafahantsika mandeha miaraka amin'izy ireo amin'ny fotoana tsara indrindra amin'ny antoandro fa amin'ny alina koa. Noho izany, hitantsika fa akanjo kintana izy io ary ankehitriny tsy mila mampifanaraka azy amin'ny fiainantsika fotsiny isika. Hanomboka ve isika?
1 Pataloha hoditra voapaika mahitsy
2 Pataloha leggings vita amin'ny hoditra faux
3 Pataloha tongotra miloko miloko
Pataloha hoditra voapaika mahitsy
Misy karazana pataloha maromaro ananantsika amin'ny fironana.. Satria na dia efa fantatsika aza fa tia ny vokatra omen'ny lamba toy izany isika, dia tokony hojerentsika ankehitriny ny fomba anaovantsika azy sy amin'ny ora firy. Tsy ho sarotra amin'ny safidy rehetra atolotry ny mpivarotra lamaody antsika izany. Noho izany, ny fivarotana toa an'i Zara dia anisan'ireo voalohany misafidy ny hampiseho amintsika ny tsara indrindra hatrany ary amin'ity tranga ity dia pataloha mahitsy.
Tsy tery loatra araka izay azontsika eritreretina fa miaraka amin'ny fanapahana tena ahazoana aina izay ahafahanao mankafy ny famaranana mandritra ny andro sy amin'ireo fotoana manokana indrindra amin'izany. Ny valahana avo dia iray amin'ireo zava-bita lehibe afaka nahatratra ny fampiononana ilaintsika. Noho izany, amin'ny lafiny iray, io no vokatra farany mahomby indrindra amin'ity vanim-potoana ity. Fa amin'ny lafiny iray hafa, koa ireo izay manana loaka amin'ny kitrokely sy ireo izay mamela antsika ny antsipirian'ny fanjaitra na zana-tsipika voamarika tsara eo amin'ny faritra anoloana. Izany dia hanome anao fahamendrehana bebe kokoa amin'ireo fisehoan'ny birao ireo, ohatra.
Pataloha leggings vita amin'ny hoditra faux
Raha tsy misy fisalasalana, dia hisy foana ny fomba hiandrasana antsika ary toy izany, ny legging no ho miavaka indrindra. Satria raha mieritreritra azy isika dia atambatra amin'ny endrika hafa fa izy rehetra no mahazo aina indrindra. Azonao atao ny misafidy ny manampy palitao sy blouse, izay samy tonta amin'ity vanim-potoana ity. Na, mijanona amin'ny akanjo ba lava malalaka sy lava izay afaka manarona ampahany amin'ny vatanao. Ny leggings koa dia azo jerena amin'ny kiraro na kiraro ankle ary koa kiraro fanatanjahan-tena. Izany hoe miankina amin'ny akanjo ambony nofidinao dia azonao atao ny manambatra azy ireo araka izay itiavanao azy.
Pataloha tongotra miloko miloko
Efa manana roa isam-bolana isika, satria na dia hita eo amin'ny loko mainty aza ny fiatraikany amin'ny hoditra, dia nivoatra koa izy. Ka tsara kokoa hatrany ny mahay mankafy ny zava-baovao sy ny fijery kanto. Na dia afaka mampifangaro antsika amin'ny hafa rehetra aza ny loko mainty, dia tsy azontsika atao ny manilika alokaloka sasany toy ny mena. Satria fantatsika fa izy io dia iray amin'ireo mazoto indrindra ary hanome hery ny ririnina izy ireo. Noho izany dia tokony ho eo amintsika hatrany izany. Mazava ho azy, ny firesahana momba ny alokaloka, ny volontsôkôlà dia ny hafa fototra indrindra amin'ity vanim-potoana vaovao ity.
Noho izany, azonao atao izao ny misafidy ny loko fototra mainty, mena, volontany ary azo antoka fa ho hitanao koa ny maitso hafahafa. Izy rehetra dia ho eo anilanao hanome anao ny fomba tsara indrindra. Amin'ity tranga ity dia tavela miaraka amin'ny pataloha avo volo ankoatry ny fananana tongotra malalaka. Toa miverina ny hevitra amin'ny fotoana hafa mba hipetraka amin'ny fironana ankehitriny. Noho izany, tsy afaka tsy misy pataloha hoditra ianao, na aiza na aiza no jerenao. Akanjo kintana ve ianao amin'ny vanim-potoana?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » lamaody » fironana » Ny karazana pataloha hoditra rehetra dia miverina amin'ny fararano
Torohevitra 3 hialana amin'ny findainao
Inona no atao hoe fitiavana mahaketraka?